Binance: Pakarepo Kiredhiti Kutamisirwa neSEPA Waya Kutamisa - Cazoo
Binance: Pakarepo kukwereta kiredhiti pamwe SEPA waya kuchinjisa
musha » musha » Binance: Pakarepo kukwereta kiredhiti pamwe SEPA waya kuchinjisa
Tag: Binance, Kutumira kwaBinance, Binance Referral ID, Commission dhisikaundi, SEPA Pakarepo
Ino ndiyo nguva yako yekutanga pano? Cazoo, zvinofadza zvakadii!
Binance yakati yaunza chinhu chitsva: iyo SEPA Pakarepo. Iyi sevhisi inowanikwa 24/7 uye inobvumira vashandisi ku chiriporipocho kuisa EUR kubva kumaakaundi avo ebhangi eSEPA kuenda kumaakaundi avo eBinance, uye pakarepo bvisa EUR kubva paBinance account kuenda SEPA kubhengi account.
Vashandisi vanogona kuisa EUR kuburikidza neSEPA Instant kune yavo zero-mubhadharo maBinance maakaunti nekusarudza Tenga Crypto> Bank Deposit> Bank / Card Deposit - Bank Transfer (SEPA).
Ive nekuchenjerera zvakadaro, haina kuzvipira kune wese munhu:
SEPA Instant EUR inochengeterwa uye kubvisa zvinongowanikwa kune vashandisi vane akaundi yebhangi mukati meSEPA zone uye vakapasa kuzivikanwa kweBinance.
Mamwe mabhangi haatsigire SEPA Instant parizvino. Vashandisi vanobva kumatunhu akakodzera vanorairwa kuti vabvunze kubhangi maererano nekuwanika kweSEPA Instant uye mari inogona kubhadharwa nebhangi.
Iyo sevhisi inowanikwa kune ese madhiri uye kubvisa muEUR.
Binance haina basa nekunonoka kupi kana vashandisi vaita SEPA Instant kuisa kana kubvisa.
Hausati wasainira Binance zvakadaro? Unozviita nekodhi yangu yekutumira EV6X8DW5? Iwe unogona zvakare kudzvanya apa: kusaina kutenga crypto paBinance. Nekusaina neichi chinongedzo, iwe uchave uine 10% yakaderedzwa makomisheni ipapo, nekusingaperi.
Kodhi dzekutumira dzakagadzirwa kukurudzira vanhu kusaina nechimiro chemuti. Izvo zvinogara zvichishamisa kana iwe ukaverenga nezve izvi zvinhu, iwe unogara uchifunga nezve pyradmide, iyo inoratidza chiitiko chisiri chakakomba uye chisiri pamutemo. Muchokwadi nyika zvachinja: kwemakore mazhinji FaviJ yakashandisawo zvinongedzo, semuenzaniso. Ngatitorei YouTube semuenzaniso: kwemakore yakashandura modhi yayo yekuita mari ichiipfuudza kubva kuRevenue ye (Zviuru) Kufarirwa kuenda: pakati pezvinyorwa zvaunoburitsa, gadzira vhidhiyo yako nemubatsiri wako, isa kodhi yako yekuendesa uye zvishuwo zvakanaka. Nguva dzavari changin ' akaimba Dylan!
Ini ndinokuyeuchidza iwe: iyo 20% kuderedzwa pamakomisheni, zvachose!
Nyaya yapfuuraDiscount pane Binance fizi
Nyaya inoteveraNdeipi iri yepamusoro purogiramu yekutenga mari yemadhora?
Maitiro ekuwana mari yedhijitari neBinance Liquid Swap
Maitiro ekupa kurima neLiquid Swap pane Binance